imaginary clouds: BIntan 4
ရောက်ဖူးတဲ့ ချောင်းသာကမ်းခြေ နဲ့ မတူတာတချက်က ပင်လယ်ရေပါပဲ ။ မနက်စောစော ၇ နာရီ ၊ ၈ နာရီကျော်ကျော်လောက်ဆို ကမ်းမြေမှာရေမရှိဘူး ။ တယောက်ယောက်က ပိုက်နဲ့စုတ်ထုတ်သွားသလိုပဲ ။ နေမြင့်လာမှတဖြေးဖြေးရေလည်းလိုက်တက်လာတယ် ။ ရင်ခေါင်းလောက်အမြင့်ရှိတဲ့ရေကိုရောက်ဖို့ နည်းနည်းလှမ်းလှမ်းသွားရတယ် ။ ချောင်းသာကမ်းခြေကတော့ ရေ အဲသလိုကျတာ မကြုံဖူးဘူး ။ ဘယ်အချိန်ရောက်သွားသလဲနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိ ။
တော်တော်လှမ်းလှမ်းထိ ရေ အနက်ကသိပ်မမြင့်တော့ ငှက်ပျောသီး လှေ စီးတဲ့အခါ ရှေ့ကဆွဲသွားတဲ့လှေမောင်းတဲ့သူက ဇတ်ခနဲကွေ့လိုက်လို့် လှေမှောက်သွားတဲ့အခါ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး ။ ကျနော်စီးတုန်းကလည်း တခါမှောက်သေးတယ် ။ မှောက်ဆို ကျနော့်တို့စီးတဲ့အခေါက်မှာ စီးတဲ့ ဘစ်ကနီနဲ့ကောင်မလေး နဲ့ လှေဆရာ နဲ့ကြားမှာ ဘယ်လို ဓါတုဗေဒ ဓါတ်ကြွမူတွေ ၊ ဓါတ်ပြုမူတွေရှိနေမှန်း မသိရဘူးလေ ။ မြန်မြန်မောင်းတာ ၊ ဖြည်းဖြည်းမောင်းတာ ၊ စချင်တာ အားလုံးသူ လက်ထဲမှာကိုး ။ သဘောကတော့ ကောင်းပ ။
မနက်စောစော ရေမရှိသေးချိန် ( ရေကျချိန် )
Posted by icn2 at 20:11
khin oo may 21 June 2012 at 20:20
2nd photo . the most I Like
khin oo may 21 June 2012 at 20:40
ရီဒါထဲကနေသွားကြည့်တာ ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်ဆိုတော့အပေါ်တက်လာရတာဘဲ .
msnitwit 21 June 2012 at 20:47
The most I like is the last one.
This writing style is better than usual style, and I llike it. Cheers!
icn2 21 June 2012 at 21:36
အင်းလေး နံနက်ခင်း - ၂ - နန်းပန်ဈေးသို့
အောက်စ်ဖိုဒ် ဗုဒ္ဓဝိဟာရ ( စင်ကာပူ )
2012 Summer Palace -Ayutthaya